Imihla emiselweyo: yoyilo loyikiso loyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imihla emiselweyo: yoyikiso yoyilo loyilo
Ngaphandle kwento yokuba uwenzile wonke umsebenzi ukuza kuthi ga ngoku, wenza izilungiso ezihambelana noko umthengi wakho ebekufuna, ufumanisa ukuba zineentsuku ezintathu ezishiyekileyo kude kube ngumhla wokugqibela kwaye unamaphepha angama-20 ashiyekileyo kulwakhiwo / kweliso. Inokwenzeka njani loo nto? Ngoku uzifumana ungene emanzini kugqatso lwasendle ngokuchasene newotshi, apho kuya kuvavanywa ubuchule bakho kunye nokunyaniseka kwakho njengomyili. Ngumzuzu xa usokola, uxinezelekile, uphelelwe lithemba kwaye ufuna ukukhalela uncedo ngawo onke amandla akho.
Apha sabelana nawe ngothotho lwamaqhinga malunga indlela yokuhlangabezana nexesha elisikiweyo kwaye ungafi uzama.
1 Udibana njani nemihla ebekiweyo
1.1 Amaxesha okuhambisa kunye nomthengi
1.2 Amaxesha okuhambisa kunye nomyili
Udibana njani nemihla ebekiweyo
Amaxesha okuhambisa kunye nomthengi
Kwisivumelwano, misela elona nani liphezulu lezilungiso isimahla umthengi anelungelo lokuyenza. Nje ukuba kudlule, misela isixa semali kulungiso ngalunye olongezelelweyo. Oku kuyakwenza ukuba umxhasi wakho acinge kakuhle xa ecela utshintsho, kwaye siyakuphepha ukuqhubeka silungisa amaxwebhu kwaye sinokuqhubela phambili.
Icacisa ukuba, kulungiso ngalunye olwenziweyo, kufuneka yongeza iintsuku ze-X ukuya kumhla wokuqala wokuhanjiswa owubandakanyayo kolo xwebhu. Umzekelo: ukulungiswa = 2 ngaphezulu kweentsuku; Izilungiso ezi-4 ziya kuthetha ukungenisa umsebenzi kwiveki enye emva kwexesha.
Amaxesha okuhambisa kunye nomyili
Sebenzisa zonke iikhalenda nee-ajenda oyifunayo. Ukuba awuzisebenzisi, lwela ukuba ungene kumkhwa wokubhala yonke into phantsi kwaye ujonge imisebenzi esalindelweyo: uya kusebenza ngakumbi. Kuyacetyiswa: ikhalenda yodonga (yegumbi), ikhalenda yedesktop (yesifundo), ikhalenda kwikhompyuter yakho ene-alamu kunye ne-ajenda (ukuthatha nawe naphina). Ekuqaleni banokubonakala ngathi baninzi kakhulu, kodwa uyakuxabisa ukuba nesikhumbuzo kuyo yonke indawo.
UHLAZIYO. Nokuba uneekhalenda kunye nee-ajenda ezingakanani onazo, ukuba awuqhubeki uzihlaziya ngolwazi olutsha, ngekhe zikuncede. Cazulula imisebenzi oyenzileyo, bhala leyo isalindelwe.
Sebenza ngaphezulu kweeyure okuzo nemveliso ngakumbi, kwaye kunciphisa umthwalo womsebenzi wexesha elincinci le-lucid. Ngaba uyathanda ukuvuka ekuseni okanye uhlale kude kube sebusuku? Ukuba ungowokuqala, zama ukukrola iiyure ezininzi ngosuku ngokuvuka ekuseni kwaye uqalise usuku lwakho lokusebenza ngaphambi kokuba nabani na awugqibe ngeeyure zakho eziphantsi; ukuba ungomnye wesibini, cebisa ukuba uthathe iiyure ekuzeni kokusa.
Musa ukusebenza kakhulu. Emva kokufunda inqaku elidlulileyo, unokucinga ngokudibanisa iiyure ezi-2 okanye ezi-3 kusuku lwakho lomsebenzi. Ummiselo umisela iiyure ezisi-8 njengezo ekufuneka umqeshwa enze ngazo imisebenzi yakhe, ke musa ukuzobaxa kwaye uthathe ixesha lakho lokuzonwabisa. Kulo msebenzi babaluleke njengabanye, kuba bayasikhuthaza kwaye basigcina simamele.
Khusela peck kwimidiya yoluntu/ imeyile. Ukuseka iiyure ezithile ngosuku ukukhangela kunye nokuphononongwa Umzekelo, enye ngo-8: 00 kusasa ize enye ngo-20: 00. Elinye ixesha, ngaphezulu kwako konke, kunqande ukufikelela kwesi silingo.
Kufuphi: zama ukuzilungiselela ngcono ukunqanda ukubanjwa yinkomo. Ngaba uyawazi amanye amaqhinga okuhlangabezana nemihla ebekiweyo? Okanye unayo nayiphi na ingcebiso? Ungathandabuzi ukwabelana nathi ngalo ushiya uluvo Ekupheleni kweposi.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ukwenza uhlahlo-lwabiwo mali loyilo lwegraphic | Iingcebiso kunye nezixhobo, Iingcebiso zokuzilungiselela ngcono | Indlela ye-GTD
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Imihla emiselweyo: yoyikiso yoyilo loyilo
Iifonti zasimahla ezili-10 zokusebenzisa kunye nokonwaba